Maalin: Janaayo 10, 2020
1 (mid) Xoghaye qunsulka guud ee qunsuliyada guud ee turkiga waxaa loo ogolaanayaa booska Xoghayaha. II) XAQ U YEELASHADA deeqda: ahaan 1. Muwaadin ka mid ah Republic of Turkey, 2. Taariikhda Imtixaanka 41 sano [More ...]
Abdullah Gül University (AGU) wuxuu heshiis iskaashi la saxeexday Deutsche Bahn (Railways Jarmal), shirkadda ugu weyn ee gaadiidka iyo saadka ee adduunka iyo shirkadda ugu weyn wadooyinka tareenka ee Yurub. AGU [More ...]
Saldhigga metro ee Mecidiyeköy, ardayda dugsiga sare waxay qabanqaabinayeen munaasabad wacyi gelin ah si ay ugu soo jiitaan qawaaniinta gaadiidka dadweynaha. Ardayda matalaya orodka ugu dhaqsaha badan orodka tareenka dhulka hoostiisa wakiil ahaan, waxay diyaariyeen aadaabkii ay ku dhejiyeen boodhadhkooda iyo xaashiyadooda. [More ...]
Hogaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu ayaa ka hadlay barnaamijka 'Channel Channel Workshop ü oo ay qaban qaabisay IMM. Dik Waxaan ku gaarnay heer sidan oo kale ah inay kor u qaadaan cuntada la siiyo ardayda jaamacadaha. 15kii Luulyo qaraabada shahiiday iyo halyeeyayaashii ayaa eegay lacagta [More ...]
Duqa magaalada Nizip Mehmet Sari, Gaziantep iyo adeegga tareenka degmada Nizip ayaa u adeegi doona nidaamka tareenka inuu noqon doono mid aad u deggan oo deggan, ayuu yidhi. Duqa magaalada Nizip Mehmet Sarı, [More ...]
Bandhigga Macaamiisha Elektaroonigga ah - CES 2020, Fiat wuxuu ku soo bandhigay fikrad koronto casri ah Fiat Concept Centoventi. Magaalada Las Vegas, carwooyinka elektiroonigga ah ee adduunka ugu weyn CES 2020 [More ...]
Guddoomiyaha Xisbiga Wanaagsan Meral Akşener ayaa ka hadlay İstanbul Channel Workshop İ oo ay soo qaban qaabisay IMM. Akşener ayaa yidhi, “Kanaalka ayaan diirada la saarin Istanbul 9 sano. Kuwa dhahaya 'Ecdat ecdat' [More ...]
Turkey ayaa Enterprise Group Automobile (TOGG), auto gudaha US Las Vegas ee Electronics Macaamilka Show lagu qabtay (Waxaaad) dunida ku soo bandhigay dadweynaha. Sida laga soo xigtay warbixinta ay wadaagaan Turki ee LinkedIn warsan Baabuurta Initiative Group CEO TOGG [More ...]
Kahramanmaraş mashruucii hore ee Duqa Magaaladda Fatih Mehmet Erkoç, nidaamka tareenka fudud wuxuu ku yaal shelf. Duqa magaalada Güngör iyo Ak [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç, wuxuu shir jaraa'id ku qabtay Erciyes. Kulankaas, Duqa magaalada Büyükkılıç wuxuu qiimeeyay sanadka 2019 wuxuuna siiyay macluumaad ku saabsan maalgashiga la sameyn doono 2020. Sanadkii 2019, magaaladu waxay heshay 3 bilyan 149 [More ...]
Tareenkii ugu horreeyay ee dunida ee bilaa darawal ah, kaas oo ku safri kara 350 kiiloomitir saacadiiba, ayaa waxaa laga dhigay Shiinaha. Tareenka ayaa u adeegi doona inta udhaxeysa magaalada caasimada ah ee Beijing iyo magaalada Zhangjiakou, halkaasoo 2022-ka Olombikada qaboobaha uu ka dhici doono. Dadka Jamhuuriyadda Shiinaha ee tikniyoolajiyada tareenka xawaare sare ku socda [More ...]